Ụdị Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ, Ụgwọ, Uru nke Incorporation
Top na-atụ aro ka ndị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-adịghị
Ndị na-esonụ bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ nke na-enye nchikota nchedo ego, nchebe iwu na nzuzo. I nwekwara ike ịhụ tụnyere chaatị maka ụsọ oké osimiri LLC site na ịpị njikọ a.
Nevis - Nzuzo, Nchekwa na Ndabere. Mụta ihe mere Island nke Nevis ji bụrụ otu n'ime obodo ndị a ma ama taa. Karịsịa, chọpụta ngwá ọrụ dị egwu nke kachasị ike: na Nevis LLC.
Belize - Ụlọ ọrụ, IBC (Business Business Company) na Ụlọ akụ. Na mgbakwunye, ị ga-ahụ na Belize na-enye ndị dịgasị iche iche nke nhọrọ ndị na-emepụta mba. Dịka ọmụmaatụ, nke Belize LDC, Belize ọzọ na LLC na-enye ụfọdụ uru pụrụ iche nchebe uru.
Bahamas - Ụtụ Ụtụ Ụgwọ, Nzuzo na Ọnụ ala. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịgụ gbasara nhọrọ dịgasị iche iche dị na Bahamas.
British Virgin Islands - Nchekwa kachasị, Nchedo Akụrụngwa na Nzuzo. Ọzọkwa, ị nwere ike ịchọpụta otú ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na IBC si BVI nyere aka chebe akụnụba gị.
Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu: ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ.
Ozi Ụlọ ọrụ nke mba ahụ
Ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ bụ ụlọ ọrụ ndị dị ka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere njedebe (Ụlọ ọrụ) gbara akwụkwọ na mpụga mba nke obibi. Ndị na-ejikọta ụlọ ọrụ ndị dị n'ọdụ ụgbọ mmiri na-eme otú ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, mgbe ha nwere mmasị na nchedo ego, mgbasa ozi na ego nzuzo. Tụkwasị na nke ahụ, ozi dị n'okpuru na-achịkọta ihe mere ndị mmadụ ji emepụta ụlọ ọrụ ndị a:
Onyinye ego (dabere na ikike gị)
Ntughari ego nke International
Atụmatụ Nlekọta Ụlọ Ọrụ nke mba ahụ
N'ebe a, ị ga-ahụ ndepụta nke ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri atụmatụ nchebe ego, ụgwọ ha na uru ha. Tụkwasị na nke a, ngalaba a na-atụle akụkụ ndị dị mkpa nke atụmatụ atụmatụ nke mba ndị ọzọ, tinyere ụlọ ọrụ, akụ na ụma na mbubata ala, na esi eme ha na ihe kpatara ya. Karịsịa, anyị nwere ike ịmepụta ụlọ akụ akụ na ụzụ maka ụlọ ọrụ ọ bụla ị kwadobere site na ọrụ anyị. Ọzọkwa, i nwere ike mụta ihe mbupụ ala Ebe a.
Akpa, ọtụtụ mba ndị dị n'èzí nwere usoro iwu kwadoro nke ọma maka ndị na-achọ nchedo ego na ego nzuzo. Tụlee ihe ndị a ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ guzobere uru na eziokwu. O doro anya na US nwere 4.4% nke ọnụ ọgụgụ ụwa, ma 70% nke ndị ọkàiwu ụwa na 96% nke iwu ikpe ụwa. Ọzọkwa, n'adịghị ka mba ndị ọzọ n'ụwa, anyị enweghị onye na-akwụ ụgwọ na-akwụ usoro iwu. N'ụzọ dị iche, na mba ndị ọzọ, onye na - enwe ikpe ga - akwụ ụgwọ ya na ndị na - emegide ya. N'ihi ya, iwu ha na-eme ka ikpe na-adighi ụba.
Ụlọ ọrụ mbupụ = Ọnụ na Alligators
Na US ma ọ bụrụ na ị na-etinye aka na ikpe ma merie, ị ka na-akwụ ụgwọ ego gị, ya mere ị ka na-efu. N'akụkụ aka nke ọzọ, ịmalite ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ na-esiwanye ike. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye ikpe iwu kpebiri ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ gị. Ọ nwere ike ịdekọrịta njikọ iji nwee ikpe ahụ site na nyocha nyocha. Ha, n'aka nke ya, kpebie ma ikpe ahụ ọ ga-akpọrọ ya n'ụlọ ikpe. Ugboro ugboro, njikọ ahụ abụghị nke a na-akwụghachi ụgwọ. N'ihi ya, ọ bụghị ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ ikpe. Ya mere, nke a bụ nchekwa siri ike nke nchedo ikpe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, naanị site n'iji iwu iwu nke ndị nwe obodo na-eme ka ị belata nsogbu nke onye na-ajụ gị.
na a Nevis LLC, dịka ọmụmaatụ, mmezi 2015 mere ka onye na-akwụ ụgwọ kwụnye $ 100,000 nkekọ tupu ha enwee ike ime ihe ọ bụla iji chịkọta ikpe megide onye otu ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-eme iwu iwu Nevis mere ka ụkpụrụ na 2018 na-enye ụlọikpe Nevis ikike iji dozie njikọ maka ego ọ bụla. Ego a zoputara site na idobe ego gi site n'ile anya anya, ya mere, igbochi mmechi iwu, ichebe ihe onwunwe gi site n'onye gbasara iwu na onodu ego ndi ozo bu ufodu n'ime otutu ihe mere eji agapu n'èzí. Njikwa ọzọ dị mma maka ụlọ ọrụ bụ Cook Islands. O doro anya na ị nwere ike ịgụ isiokwu a na Nevis LLC vs. Cook Islands LLC nke na-atụle ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
Ụdị Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ
Ihe ọzọ dị mkpa bụ na ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ na-enye nnukwu ego nzuzo karịa ụlọ ụlọ ụdị. Ihe atụ nke ndị a gụnyere ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-ejighị ụgwọ ma ọ bụ ụlọ ahịa azụmahịa ụwa (IBC). E nwere ọtụtụ iwu ndị dị n'èzí na iwu ndị ọzọ dị mma na US, Canada ma ọ bụ UK. Obodo ndị a na-asọ mpi maka ndị ahịa ụwa. N'ihi ya, iwu ha inwe ihu ọma nke inwe, nzuzo maka ndị isi na ndị nduzi na ndị na-abụghị ndị mba ọzọ ikpe.
Njikọ aha na Offshore
Dị ka a pụrụ ịhụ, nsogbu nke ikpe na-emerụ onye nwe ụlọ ahịa America bụ elu. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ ndị ọkàiwu na-agbagha naanị iji lanarị. N'ezie, ụfọdụ anaghị ahụ n'ime ụlọikpe. Nke ahụ bụ, ha na-eji usoro iwu iji mee ka ndị isi ego na-azụ ahịa gaa ebe obibi na-enweghị ezi uche. Ịnwere ike ịmatakwu banyere otu ụlọ ọrụ dịpụrụ adịpụ ndebanye aha nwere ike inye aka na nchedo nchedo gi akpọ OffshoreCompany.com ma ọ bụ by mezue ụdị na ibe a. Anyị na-etolite ọtụtụ puku ụlọ ọrụ azụmahịa kwa afọ, na-enyere ọtụtụ puku ndị America aka na nchebe na nzuzo ha na inye nduzi site n'aka ụlọ ọrụ ndị dịpụrụ adịpụ iwu.